Sparkle Unicorn, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Unicorn Sparkle, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Avereno jerena indray ny momba ny rindranasa iray izay ahafahantsika misintona maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ary hanampy ny zanatsika ho variana mandritra ireo datin'ny Noely ireo. Unicorn Flash, manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro. Araka ny soso-kevitr'ilay anarana, Unicorn Flash, dia lalao izay tsy maintsy hamolavolan'ny ankizy kely ny unicorn azy ireo. Mba hamoronana unicorn anao manokana dia azonao atao ny misafidy loko maro, kojakoja ary sticker. Raha vantany vao noforonina, ny ankizy kely dia ho afaka hiditra amin'ny tontolon'ny majika, toy ny lanitra feno rahona, ny ala majika ary ny tontolo mamy.
Ny dia mamakivaky izao tontolo izao ao ambadiky ny unicorn dia ho feno tsy ampoizina manaitra izay tsy maintsy hisosa manaraka ny avana hahatratra ny lapa majika. Noho io fampiharana io dia tsy natao hampialana voly ny zanatsika fotsiny, ny ankizy kely dia ho afaka hahay manisa isa avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 amin'ny fiteny samihafa, satria ity fampiharana ity dia misy amin'ny teny espaniola, alemà, sinoa tsotra, sinoa nentin-drazana, koreana, frantsay, anglisy, italianina, japoney, holandey, poloney, portogey, rosiana, soedoà, Thai ary tiorka, afaka mifanakalo azy ireo amin'ny lalao lalao .
Endri-javatra an'ny Flash Unicorn
Unicorn Sparkle no lalao mihazakazaka 3D voalohany namboarina indrindra ho an'ny ankizy kely.
Ny zanakao dia afaka mamorona unicorn azy manokana, misafidy loko isan-karazany, kojakoja ary sticker.
Ny tontolo dia manana tontolo mahafinaritra 4, feno majika sy tsy ampoizina
Miaraka amin'ny fanampian'ny Unicorn, ny zanakao dia hianatra ny isa amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 amin'ny fomba mahafinaritra.
Ny fampiharana dia entanin'ny aingam-panahy Unicornio Sparkle, ilay kilalao fivarotana be mpividy indrindra avy amin'ny orinasa kilalao HABA.
Unicorn Flash dia mitaky farafaharatsiny iOS 7.0 na taty aoriana. Izy io dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch ary natao ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona.
Unicorn Flash€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Unicorn Sparkle, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Swift Tool 3.1 ho avy lohataona 2017
Raha ny filazan'ny B&H dia mety tsy tonga ny BeatsX raha tsy amin'ny lohataona manaraka